७० प्रतिशत विशेषज्ञ डाक्टर फेल – SidhaRekha
२०७४ असार २६, सोमबार ०७:१२ July 10, 2017
नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)ले विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्रको लागि लिएको विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ता परीक्षामा करिव ७० प्रतिशत डाक्टरहरु फेल भएका छन् ।
४ महिना अघि लिइएको विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ता परीक्षामा समेत करिब ३० प्रतिशत डाक्टरहरु फेल भएका थिए । ‘यसपटक फेल भएकाहरु अधिकांश पहिला पनि अनूतिर्ण भएकाहरु हुन्,’ काउन्सिलका रजिष्टार डा. दिलिप शर्माले भने ।
काउन्सिल श्रोतको अनुसार यसपटकको परीक्षामा चीनमा अध्ययन गरेका १३२ जना परीक्षामा सरिक भएकोमा १११ जना फेल भए । चीनबाट पढेका मध्ये २० जना मात्र पास गर्न सके भने एकजना परीक्षामा अनुपस्थित थिए ।
काउन्सिलले पहिले वर्षमा दुईपटक विशेष चिकित्सक दर्ता परीक्षा लिने गरे पनि यो वर्ष देखि तीनपटक लिन थालेको हो ।
एमडी/एमएस/एमडिएस विशेषज्ञता हासिल गरेर मुलुकमा आएको एक वर्षसम्म दर्ता परीक्षामा नबसे पनि विशेषज्ञको रुपमा काम गर्न पाइन्छ । विशेषज्ञता प्राप्त गरेको एक वर्ष भित्रमा दर्ता परीक्षामा पास नगरे विज्ञको रुपमा काम गर्न नपाइने प्रावधान छ ।
विशेष चिकित्सक दर्ता परीक्षा पास नभएर विशेषज्ञको रुपमा काम गर्नेहरु विरुद्घ उजुरी पर्दा कानुन अनुसार कारवाही हुने औल्याउँदै डा. शर्मा भन्छन, ‘हाल परिमार्जन गर्न लागिएको काउन्सिलको ऐन, आचार संहितामा यस्तो काम गर्दा दर्ता खारेज गर्ने सम्मको प्रावधान छ ।’
हाल मुलुकमा जम्मा करिव १९ हजार चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता रहेकोमा करिव ६ हजारभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सकका रुपमा दर्ता छन् । यो समाचार अतुल मिश्रले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
अघिल्लोबैतडीको पाटन विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउन काम शुरु
पछिल्लोकर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमाः तह लाग्दै ६० हजार कर्मचारी